Activities | U.N.O.B
Activities, Featured, General News
We are saddened by the news of Ar Gyi (Daw Mi Mi Mar) passing at Yangon on (September 30th 2020). Our thoughts and prayers are with you and your family. ချစ်ခင်ရပါသော ကိုရာဇာ၏ မိခင် ဒေါ်မိမိမာ ကွယ်လွန်သွားပါကြောင်း ကြားသိရသည့်အတွက် မိသားစုနှင့် ထပ်တူ များစွာ ကြေကွဲဝမ်းနည်းမိပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင် အပ်ပါသည်။ *(Ar Gyi’s picture was from Ko Khin Zaw’s FB post) Read More...
Activities, General News, UNOB
ဖလော်ရီဒါပြည်နယ် Boynton မြို့နေ ဦးခင်မောင်သိန်း နှင့် ဒေါ်စူဆန်သိန်းတို့မှ UNOB အသင်းကြီး အထွေထွေ ကူညီပံ့ပိုးမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ကို အသင်းအမှုဆောင် ကိုအောင်သက် အား June 2nd 2020 Tuesday ပေးအပ် လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ အသင်းကြီးမှ လှိူက်လှိူက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။ U Khin Maung Thein and Daw Susan Thein Image of Receipt We would like to express our deepest gratitude for their very generous donation of $1000 to our organization UNOB-USA on June 2nd 2020 made by U Khin Maung Thein and Daw Susan Thein. မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ – ကိုအောင်သက် Read More...
Activities, Events, Picture Gallery
Here are the some of your pictures at Photo Service from the Concert. All pictures will be ready to pick up (more…) Read More...